ग्याँस ११ सय २० रुपैयाँमै, चिनीको मूल्य ६३, दाल, नून र तेलमा भारी छुट! यी हुन् पाइने स्थान « Asia Sanchar : Nepal News Live
ग्याँस ११ सय २० रुपैयाँमै, चिनीको मूल्य ६३, दाल, नून र तेलमा भारी छुट! यी हुन् पाइने स्थान
काठमाडौं, २१ जेठ – साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा कम्पनी लिमिटेडले २० प्रतिशत छुटमा सामग्रीको बिक्री शुरु भएपछि कालिमाटीकी अनुशा थापामगर ‘सहुलियत मूल्यको पसल’मा पुगिन्।
सामग्री खरिद गर्नका लागि लाइनमा बसेकी थापामगरपछि पनि पचासौं सर्वसाधारण सामग्री खरिदका लागि कालिमाटी पुगे। कतिले त भोलि आउने भनेर फर्किए।
कहाँ–कहाँ पाइन्छ सहुलियतको सामग्री ?
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका डेपुटी सिइओ राजभण्डारीका अनुसार पहिलो दिन अधिकांश सहुलियतको पसलमा सर्वसाधारणको भीड लागेको हो।
‘खाद्य व्यवस्था तथा कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले छुटमा सामग्री बिक्री गर्न थालेपछि असाध्यै ठूलो भीड लागेको छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘भीड व्यवस्थापनका लागि प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिएर नागरिकलाई सकेसम्म सहज रुपमा सेवा दिने प्रयत्नमा छौं।’
उपभोक्ताले तोकिएको मूल्यसूचीमा २० प्रतिशत छुटसहित सामग्री खरिद गरेका छन्।
सरकारले बजेटमार्फत् व्यवस्था गरेको खाद्यान्नसहित अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदमा २० प्रतिशत छुट दिन थालिएको हो।
बिहीबार सरकारी निकायका दुई व्यापारिक संस्थानहरू खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले सूचना जारी गर्दै सो जानकारी दिएका हुन्।
सरकारले बजेटमार्फत् घोषणा गरेको खाद्यान्न लगायत तोकिएका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा राहत छुट दिन थालिएको संस्थानहरूले उल्लेख गरेका थिए।